Kalidii taliyayaashii qaarada Afrika imisaa ka hadhey? | Radio Hormuud
Tacsi ku socota: wariye Maxmed Jiciir Aw Axmed
Xiisada ka dhallatey isdiidooyinka xisbiga Wadani iyo xukuumada SL
Mas’uuliyiin ka tirsan xisbiga WADDANI oo xabsiga la dhigey iyo dibad baxa uu xisbigu ku baaqey bari oo laga digey.
Golaha Guurtidda jsl Oo Ansixiyey Guddi ay U Saareen Muddo Kordhinta Aqalka Wakiillada
Xisbiga DF oo Ikea iyo Føtex ku dhaleeceeyay Ixtiraamka ay u hayaan Islaamka
Kalidii taliyayaashii qaarada Afrika imisaa ka hadhey?
RH: Dalalka ku yaalla qaaradda Afrika ayaa kaalin ku filan ka qaatay xukunka kalitalisnimada ee ka jiray caalamka, hase ahaatee sannadihii dambe waxaa muuqatay in arrintaas ay wax badan iska baddalayeen, sida lagu qeexay warbixintan oo aan kasoo xigannay bogga Citizen Digital ee uu leeyahay telefishinka Citizen ee dalka Kenya.
Wax hadda loogu yeero "kacdoonkii Afrika" ayaa horseeday in dadka ku nool qaaradda ay si tartiib tartiib ah ugu baraarugaan sidii looga takhalusi lahaa xukunka kalitaliska ah.
Waxay arrintan markii ugu horreysay billaabatay bishii Janaayo ee sannadkii 2012-kii, markii markii kacdoon xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee Senegal Abdoulaye Wade ka dib markii uu 12 sano awoodda heystay.
Wade, oo hadda 93 jir ah ayaa madaxweyne ahaa tan iyo sannadkii 2000.
Maamulkiisa waxaa loo jeediyay eedeymo farobadan oo uga yimid mucaaradka, kuwaasoo ku dhaliilay inuu ku xadgudbay shuruucda musharraxnimada doorashada.
Ka dib waxaa ku xigay madaxweynihii hore ee dalka Burkina Faso Blaise Compaore oo isagoo xilka hayay 27 sano maamulkiisa lasoo afjaray sannadkii 2014-kii, xilligaasoo mudaharaadyo rabshado wata ay gilgilayeen guud ahaan waddanka.
Xoogaa ka dib, hoggaamiyihii ugu waqtiga dheeraa Afrika, oo muran badan uu hareeyay, Robert Mugabe ayaa xukunkiisa lasoo afjaray 21-kii bishiiNofembar ee sannadkii 2017-kii.
Mugabe waxaa talada waddanka Zimbabwe kala wareegay hoggaanka milatariga.
Xilli aad u dhawaa oo ahaa 2-dii bishan Abriil, 2019-ka, ayuu iscasilay madaxweynihii xanuunsanaa ee dalka Aljeeriya Cabdicasiis Butafliiqa.
Waxaa salfaday mudaharaadyo nabadeed oo guud ahaan dalkaas ka socday muddo 6 isbuuc ah, waxaana waday dad dhalinyaro ah oo dalbanayay in lasoo afjaro xukunkiisa jiray 20-ka sano.
Ka dib maanta oo khamiis ah, oo taariikhdu ay ku began tahay 11-ka bisha Abriil, 2019-ka, waxaa xilka laga xayuubiyay madaxweynihii xukunka dheeraa ee dalka Suudaan, Cumar Xasan Albashiir, ka dib markii ay heerkii ugu xumaa gaareen mudaharaadyo ay shacabka uga soo horjeedeen maamulkiisa.
Wasiirka gaashaandhigga Suudaan, Ahna madaxweyne ku xigeenka, Cawad Ibnu Cawf ayaa ku dhawaaqay in Al-Bashiir xukunka laga wareejiyay uuna ku jiro xabsi guri.
Xil ka qaadista Bashiir ayaa tirada hoggaamiyeyaasha Afrika ee sida khasabka kursiga looga dajiyay ka dhigeysa 5 madaxweyne.
Waa kuwan madaxweyneyaasha soo haray, oo haddii arrintan ay sii socota laga yaabo inay wadnaha farta ku hayaan.
Madaxweyne Ismaïl Omar Guelleh ( Ismaaciil Cumar Geelle)
Waxa uu ku dhashey magaalada Diridhaba ee dalka Itoobiya 27 November 1946kii Waxa uu dalka jabuuti ka tallinayey tan iyo sannadkii 1999 kii oo hada laga joogo 20 sanno. isaga oo qaab qori isu dhiib ah xukunka ugala wareegey adeerkii Xasan Guuleed Abtidoon.
Waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha lagu tilmaamo kallidii tallisaka qaarada Afrika isaga oo xukunka iyo awooda dhaqalaale ee dalka Jabuuti si buuxda ugu gacan galliyey qoyskiisa iyo qaraabadiisa, dalka jabuuti kama jirto madaxbanaani hadal iyo mid siyaasadeed toona Mr. Geele waa hogaamiye kamid ah kuwa ugu lacagta badan qaarada Afrika maadaama oo dhaqaalaha yar ee dalka soo gala uu si dadban iyo sitoos ahba jeebada ugu shubto halka bulshadiisu ka gaajooneyso.
Madaxweynaha Cameroon Paul Biya
Biya oo 86 jir ah waxaa loo aqoonsan yahay hoggaamiyaha Afrikaanka ah ee ugu muddada dheer, isagoo xilka madaxtinnimada Cameroon hayay tan iyo 6-dii bishii Nofembar ee sannadkii 1982-kii.
Wuxuu awood yeeshay intii uu jiray maamulkii madaxweynihii hore ee dalkaas Ahmadou Ahidjo, xilligaas oo uu ahaa xog hayaha guud ee madaxtooyada, laga soo billaabo 1968-kii ilaa 1975-kii.
Kadibna wuxuu noqday ra'iisul wasaaraha Cameroon intii u dhaxeysay sannadihii 1975-kii ilaa 1982-kii.
Wuxuu xilka kala wareegay Ahidjo ka dib markii uu iscasilaad lama filaan ah qoray sannadkii 1982-kii.
Madaxweynaha Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Obiang wuxuu afgambi milatari ku riday adeerkiis, Francisco Macías Nguema, bishii Agoosto ee sannadkii 1979-kii, tan iyo xilligaasna wuxuu xukumayay dalka Equatorial Guinea.
Xukunkiisa waxaa markii hore loo tixgaliyay inuu dhanka bani'aadanimada ku dhaamo xukunkii adeerkiis, balse markii dambe waxaa soo kordhayay dhaleeceyn loogu jeedinayay inuu arxan daran yahay.
Madaxweynaha Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso
Madaxweyne Nguesso wuxuu xafiiska ku sugnaa muddo 34 sano ah, isagoo markii ugu horreysay xilka hayay intii u dhaxeysay sannadihii 1979-kii ilaa 1992-kii, ka hor inta uusan xilka ku noqonin sannadkii 1997-kii, ka dib markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye.
Waxaa markii dambe dib loo doortay bishii Maarso ee sannadkii 2016-kii.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni
Museveni wuxuu ka qeyb qaatay kacdoonkii fallaagada ee xukunka looga tuuray hoggaamiyeyaashii hore ee Uganda Idi Amin oo xukunka hayay intii u dhaxeysay 1071-kii ilaa 1979-kii iyo Milton Obote oo xlka hayay intii u dhaxeysay 1980-kii ilaa 1985-kii.
Wuxuu Museveni xilka la wareegay sannadkii 1986-kii.
Maamulkiisu wuxuu sannadihii lasoo dhaafay culeys badan kala kulmayay fannaanka siyaasiga isku baddalay ee lagu magacaabo Bobi Wine, kaasoo sheegay inuu Museveni loollan ku galin doono doorashada madaxtinnimada ee sannadka 2021-ka.
Madaxweynaha Chad Idriss Deby
Madaxweyne Deby wuxuu xukunka la wareegay sannadkii 1990-kii.
Wuxuu xafiiska madaxtooyada joogaa ilaa maanta, isagoo markii shanaad si uu muran ku jiro ugu guuleystay doorashadii madaxtinnimo ee dhacday bishii Abriil ee sannadkii 2016-kii.
Deby wuxuu xilka madaxweynaha hayaa ku dhawaad 29 sano oo xiriir ah.
Madaxweynaha Eretariya Isaias Afwerki
Afwerki waa madaxweynihii ugu horreeyay ee uu yeesho dalka Eretariya, kursigaasna wuxuu ku fadhiyay tan iyo markii uu waddankaas xornimada qaatay sannadkii 1993-kii. Ilaa maanta wuxuu talada hayaa muddo 26 sano ah.
Madaxweyne Afwerki wuxuu sannadkii lasoo dhaafay heshiis la ga;ay Itoobiya oo muddo dheer ay colaad kala dhaxeysay.
Kolding: Shaqo Dhimid Balaadhan Oo Lasameyndoono Bilaha Soo Socda
Odensa.Denmark. H.C Andersen Skole oo qarka u saaran in la xidho
Warbaahinta Denmark oo ka hadashay booqashadii wasiirka arrimaha dibadda ku tegay Soomaaaiya
Denmark: Degmooyin Lacag Ku Bixinaya Si Ay Shaqo Laawaha Iyo Dembiilaha Xaafadaha Qaar Uga Raraan.
Fajr 06:02 06:10 06:11 06:00
Shuruq 07:53 08:01 08:02 07:51
Dhuhr 11:57 12:05 12:06 11:55
Asr 13:36 13:44 13:45 13:34
Maghrib 15:59 16:07 16:08 15:57
Isha 17:44 17:52 17:53 17:42
Denmark: Ciqaabta xawaaraha xad dhaafka ah oo la…
Xisbiga DF oo Ikea iyo Føtex ku dhaleeceeyay Ixtiraamka ay u hayaan…
Wafti katagey Hargeysa oo booqdey Balligubadle Green House
UK: 39 qof oo mayd ah ayaa laga helay gaadhi Xamuul oo konteyner ah.
Denmark. Arimo baajiya dadka in khasab lagu mastaafiyo la rabo.
Her er den flygtede bandeleder, som politiet jagter
Danske virksomheder lider under Hongkong-uro - kan være dyrt at trodse Kina, siger ekspert
90-årig fik nej til at købe en halv portion mad - nu får hun sin vilje